Ikhaya EZENGEZIWE ZEBHOLA Abaphathi bebhola AmaBrendan Rodgers Ingane Yendaba Yobuntwana ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Biography yethu kaBrendan Rodgers iveza amaqiniso ngeNdaba yakhe yobuntwana, impilo yasekuqaleni, umndeni, abazali, unkosikazi, izingane, indlela yokuphila, i-net worth nempilo yomuntu siqu.
Kafushane nje, siveza umlando womphathi webhola oqeqeshiwe waseNyakatho ye-Ireland. ILifebogger iqala kusukela ezinsukwini zayo zokuqala, kuze kube yilapho iduma ngeLeicester City. Ukukunikeza ukunambitheka kohlobo lokuzibandakanya kukaBrendan Rodgers 'Bio, nasi isifinyezo sezithombe sempilo yakhe.
Impilo Nokuvuka kukaBrendan Rodgers.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngesitayela sakhe sokuphatha esipholile- esenza abadlali bakhe gcina ibhola futhi udlale umdlalo ogelezayo odlulayo nebhola lihamba njalo. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abalandeli bebhola ababheka iBrendan Rodgers Biography yethu ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Indaba kaBrendan Rodgers yobuntwana:
Kwabaqalayo beBiography, ubizwa ngegama lesidlaliso elithi "Buck Rodgers". UBrendan Rodgers wazalwa ngosuku lwe-26th lukaJanuwari 1973 kunina, uChristina Rodgers nobaba, uMalachy Rodgers eCarnlough, idolobhana elingasolwandle eNyakatho ye-Ireland eliboniswe ngezansi ngeGoogle Map.
UBrendan Rodgers ukhulele emzaneni onenkinga waseCarnlough.
Umphathi ophumelele waseNgilandi onemvelaphi yomndeni waseNyakatho ye-Ireland wakhula njengengane endala kubafana abahlanu abazalwa ngabazali bakhe- uChristina (mum) noMalachy (ubaba). UBrendan Rodgers wayevela emndenini ophakathi nendawo owawusetshenziswa ubaba wakhe owayengumdwebi nomhlobisi. Ngenkathi ubaba wakhe ematasa nomsebenzi wakhe wokupenda nokuhlobisa, umama kaBrendan, uChristiana wayenakekela uBrendan omncane nabafowabo. Kwesinye isikhathi uzibandakanya njengevolontiya lenhlangano yokupha yase-Ireland.
UBrendan wakhula ehlangabezana nezinkinga ezithi Carnlough: Njengomfana omncane owayeneminyaka eyi-7, uBrendan wayephakathi kwezinye izingane ezivame ukuba phansi (zigcinwe ngaphakathi) ngenxa yezinga lobugebengu obuphakeme esigodini sakhe esasinezinkinga. Ekhuluma ngobugebengu, nge-4th kaJuni 1980, ilungu le-Ireland Independent Independent Party kanye nekhansela leLarne Borough Council uJohn Turnley wabulawa ngomkhankaso ohlomile endaweni. Lokhu kulandelwe ukushona komsubathi wamaqembu eLoyalist, u-Andrew Mason owaphinda washaywa ngabesilisa ababili bendawo.
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Edolobhaneni laseNorth Carnlough elilele, ukungakhathali kwaphela kwaphela kubafana abancane, kufaka phakathi uBrendan lapho kwakukhona ibhola ngezinyawo. Ngokuqondene nomdlalo webhola, umndeni kaBrendan Rodgers umelwe kahle, ku-fanbase ye Sheffield ngoLwesithathu kanye neCeltic.
URodger wadlala ibhola ngesikhathi semidlalo ngenkathi ehambela Zonke Saints Catholic Primary School eBallymena, idolobha eliseNyakatho ye-Ireland- ngemizuzu engama-26 ngemoto ukusuka ekhaya lomndeni wakhe. Ukubamba iqhaza kwezemidlalo bekungeyona ukuphela kwento egijima emndenini. Emuva ngaleso sikhathi, abazali bakaBrendan Rodgers babefuna ukuthi abafana babo bangagcini nje ngokuthola imfundo, kepha bathathe umsebenzi wokuziphilisa.
Ngenkathi uBrendan ekhetha ibhola, omunye wabafowabo bezingane wathatha umculo, isinqumo esenze wonke umndeni wakhe waziqhenya. Uthi bewazi?… Umndeni kaBrendan Rodgers unempumelelo yokuqala yomfowabo omncane uMalachy Jnr owaba yizwe elidumile nomculi wasentshonalanga.
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Impilo Yasekuqaleni
Ngenkathi u-bhuti wakhe omncane egqokile emsebenzini wakhe wezomculo, uBrendan Rodgers waziphatha ngokwakhe ngokulandela umsebenzi wakhe webhola. Ngemuva kwesivivinyo esiyimpumelelo ngonyaka we-1984, uRodger omncane (osesithombeni ngezansi) waqala umsebenzi wakhe wobusha njengomvikeli noBallymena United, iqembu lakhe lendawo.
UBrendan Rodgers eminyakeni yakhe yokuqala esemncane noBallymena.
Ngezinsuku zakhe zokudlala, uBrendan Rodgers wakhonza umuntu waseNyakatho Ireland U-Anton Rogan owayeyiminyaka eyi-7 eyisikhulu kunayo. Wenze umxhwele kakhulu ebukhosini bakhe obusha, okuyi-feat okwamenza wahlonishwa umhlaba wonke nangaphambi kokuthola iziqu zakhe.
Uthi bewazi?… Ngesikhathi esengumdlali we-academy, uBrendan Rodger wabizwa ukuthi azomela iNorth Ireland ezingeni lomfana wesikole. Ukuvuthwa okunjalo esemncane wabona iklabhu yakhe kwi-1987 imkhuthaza ukuba abe yibhola eliphezulu.
Iminyaka yokuqala kaBrendan Rodgers neThimba lakhe labaFundi Besikole.
URodgers uqhubeke nokuthuthuka nezwe lakhe ngemuva kokuphothula iziqu zemfundo ephakeme. Ku-1988, uqhubeke nokumela iNyakatho ye-Ireland ngemuva kokuthuthela eSt Patrick's College edlala nezwe lebhola elihamba phambili emhlabeni- Brazil.
UBrendan Rodgers udlale ibhola ngendlela afuna amaqembu akhe adlale ngayo ngenkathi iNorthern Ireland yayingazwakali nhlobo. Ngaleso sikhathi, umqeqeshi wakhe wangaphambili wayekhumbula ukuthi wayegcwele kanjani amandla futhi ethathwa njengekusasa leqembu elikhulu lakuleli. Phezu kwakho konke lokhu kunconywa, uBrendan Rodger omncane ubengazi ngalokhu AMAKHODI eza ngendlela yakhe.
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela Enzima Yendaba Yodumo
Ngemuva kokuguqula ubungcweti neBallymena United, uBrendan Rodger eneminyaka engu-18 usayine ukuFunda. Uthi bewazi?… Umsebenzi wakhe wobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu waqedwa ngaphambi kokuthi uqalwe ngenxa yesimo sokwehla kwamadolo owaziwa nangokuthi Dissecans yomndeni owaziwa ngokuthi yi-osteochondritis.
UBrendan Rodgers wahlushwa yisimo sedolo lofuzo okhubaze impilo yakhe yebhola.
Ngaphandle kokungabaza, noma yimuphi umdlali webhola oye waphila kulokhu kulimala, okuholela ekuphetheni okungazelelwe komsebenzi uzokwazi kahle kakhulu ubuhlungu obukhulu obungokomzwelo obungabubangela. Kuthathe iminyaka uBrendan Rodgers ukunqoba imizwa kanye nengqondo ebangelwe yilesi sigameko.
Ngemuva kokuthatha umhlalaphansi okuphoqelelwe, uRodger unxephezelwe nguFundile owamnika umsebenzi Umqeqeshi wentsha. Ukuze uthole isipiliyoni sokufundisa okwengeziwe, uRodger udlulele phambili ekuqeqesheni intsha ngebhola lezinyawo okungelona elenigi neNewport (IOW), Witney Town neNewbury. Futhi, emzamweni wokungezelela imiholo yakhe emincane njengomqeqeshi wentsha, uBrendan Rodger waqala ukusebenzisana naye John Lewis izitolo zokuxhasa umndeni wakhe osemusha.
UBrendan Rodgers wake wasebenza kwaJohn Lewis Store ukuze ondle umndeni wakhe.
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Ukuthi uluthole kanjani Usizo Jose Mourinho: Ngemuva kokuqoqa imali eningi ukwenza umqeqeshi wentsha kanye nomphathi wezitolo, UBrendan Rodger kuma-1990 ngasekupheleni wenza isinqumo sokuya eSpain ukuze athole imfundo yokufundisa ethuthukile. Ngemuva kwemfundo yakhe futhi njengoba ebuye wagcina umsebenzi wakhe e-Read, waqala wafaka isicelo somsebenzi namakilabhu amaningi aphezulu, elinye lawo okwayi-Chelsea FC eyakhiwe kabusha Jose Mourinho.
Izinsuku zikaBrendan Rodgers njengoMqeqeshi Wentsha weChelsea.
Uthi bewazi? Jose Mourinho wahlatshwa umxhwele yi-CV yakhe kaBrendan Rodger, ukuthi wammemela umsebenzi wentsha yase-Chelsea kwinhlolokhono ayiphasa. URodgers washiya umsebenzi wakhe wokuba ngumqondisi wesikhungo sokufunda e-Reading ukuze angene ezweni elikhulu lebhola, abe ngumqeqeshi wentsha oyinhloko we-Chelsea academy ngonyaka we-2004.
Jose Mourinho wanyusa uRodger ukuthi abe ngumphathi weqembu elibekekayo eminyakeni yakhe emibili ukupela kweChelsea. Lokhu kunyuswa kufike ngoba uBrendan wayethembeke kakhulu kumphathi wakhe (osesithombeni ngezansi) owamnika ithuba lokukhula.
UJose Mourinho wakhuphula uBrendan Rodgers ngenxa yokwethembeka ezinsukwini zakhe ne-Chelsea.
Ukulandela okhethekile Ukuhamba, uBrendan Rodgers ugcine ekulesi sikhundla ngabaphathi abalandelayo beCanada u-Avram Grant noLuziz Felipe Scolari. Ngemuva kokuthola isikhathi esanele sokukhula, uBrendan Rodger wasuka waya eWatford, Read nasedolobheni lonke laseSwansea njengomqeqeshi oyinhloko.
Edolobheni laseSwansea, lo mqeqeshi ongathandeki kakhulu waqala ukuthola ukwamukelwa ngumphakathi njengoba eqondisa iklabhu yaseWelshi ezindizeni eziphezulu, impumelelo eyamnika umsebenzi we-2012 Liverpool. ELiverpool, uBrendan Rodgers wasondela ekuzuzeni isicoco se-2014 Premier League. Phezu kokungaphumeleli, uthole isicoco seChampions League kule kilabhu (okokuqala ngqa eminyakeni emihlanu).
Ngemuva kokuphuma kwakhe eLiverpool, uRodgers waqokwa waba ngumphathi wabasubathi beScotland Cup iCeltic. Kunoku crumble, umqeqeshi we-Liverpool uye wasuka emandleni ngokuqina. He kuholele iCeltic kwisizini yasekhaya engaphathisiwe ngonyaka wakhe wokuqala, futhi ukuyisonga yonke, iziqaqa kuzo zombili izinkathi zakhe zokuqala.
UBrendan Rodgers uwine i-treble kabili kuCeltic- Inhlonipho yakhe ephezulu njengomphathi.
Abanye, njengoba besho, manje umlando.
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
UBrendan Rodgers wahlangana nentombi yakhe uSussan ngaleso sikhathi ayengeyena umzimba, ngemuva nje komzuzu wokulimala nesinqumo sokuyeka ukudlala ibhola. Bobabili babethandana cishe iminyaka eyishumi. UBrendan wayeneminyaka engu-28 lapho eshada noSussan ngonyaka we-2001 LAPHO wayengasenamzimba emhlabeni wokuphatha.
Unkosikazi kaBrendan Rodgers uSussan behlala ngokujabula ndawonye ngaphambi kwesehlukaniso sabo.
USusan Rodgers wayehlala nomyeni wakhe phakathi kwamakhulu futhi emncane, kusukela lapho wayengumphathi wesitolo eJohn Lewis, kuya lapho eba ngumqeqeshi wentsha yeChelsea futhi okubaluleke kakhulu, ngesikhathi afinyelela kuso ukuphakama komsebenzi wakhe wokuqeqesha eLiverpool. Bobabili abathandi babusise ngezingane ezimbili okungukuthi; U-Anton Rodgers (uzalwe; 26 uJanuwari 1993) no UMischa Rodgers. Ngezansi isithombe sezingane zikaBrendan Rodgers ezivela kuSusan.
Hlangana nezingane zikaBrendan Rodgers- u-Anton noMischa Rodgers.
Uthi bewazi?… Indodana kaBrendan Rodgers, u-Anton Michael Rodgers walandela ezinyathelweni zikababa wakhe. Umdlali webhola wase-Ireland odlala njengomdlali wasesiswini waqala umsebenzi wakhe wobusha ne-Chelsea FC academy kusuka e-2006 kuya ku-2011 lapho ubaba wakhe amqeqesha khona.
Indaba Yesehlukaniso: Ngesikhathi sikaRodgers eLiverpool, ubudlelwane phakathi kwakhe noSussan baqala ukuba muncu, intuthuko eyaholela empini yenkantolo enkulu phakathi kwalaba bobabili. Isidingo sokuhlinzeka ngokukhokhelwa kwezezimali sabona uBrendan Rodgers ebandakanyeka kulayini wehlukaniso wamakhilogremu ayizigidi eziningi phezu kombuso wezimpahla zomndeni wakhe oqukethe izindlu eziyi-102 ezibiza izigidi zamakhilogremu (Umbiko we-DailyMail Report).
URodgers wahlukanisa nomkakhe uSusan ngemuva kweminyaka engu-14 yomshado ngonyaka we-2015. Ubekezele futhi walinda iminyaka emibili ngaphambi kokuphakamisa nokuthi ashade nonkosikazi wakhe wakamuva uNksz Charlotte Searle. Kwakuwumshado we-fairytale owenzeka eLoch Lomond eScotland ngonyaka we-2017.
UBrendan Rodgers ushade noCharlotte eLoch Lomond iklabhu yegalufu eScottland.
UBrendan Rodger ushade noNks Charlotte Searle e2017 ngemuva nje kwezinyanga ezine eziphakamisile eNew York. Ngaphambi komshado wakhe, uNksz Charlotte Searle wayengudivosi owahlangana noRodger ngenkathi esebenza njenge Umxhumanisi wokuhamba kweLiverpool FC futhi wayesengumphathi weLiverpool. Kuncane okwaziwayo ukuthi ukuhlangana kwabo phambilini bekuyimbangela yezinkinga zomshado kaBrendan Rodgers okwaholela ekuhlukaniseni nowayengunkosikazi wakhe uSusan.
UCharlotte Searle kwenza ukwethemba kuyo yonke enye yezithombe zakhe. Ungumuntu ozidelayo ongenzi lutho ngaphezu kokuhlinzeka ngendoda yakhe ngokweseka ngokomzwelo kepha kusho ukubeka impilo yakhe nokude..
UCharlotte Searle uzijabulele zonke izingxenye zempumelelo yomyeni wakhe eCeltic.
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi uBrendan Rodgers Personal Life kude nezindaba zebhola kungakusiza uthole isithombe esiphelele sobuntu bakhe. Kude kude negumbi, uRodger uchazwa njengendoda enobungane, enenhlonipho futhi enomusa othanda ukuzihlanganisa cishe nawo wonke umuntu- kusuka kumuntu othembekile othembela kwisivakashi sendawo yokudlela.
Ukwazi uBrendan Rodgers Life Life kude nebhola.
URodger ukholelwa enjabulweni kunokulandela imali noma ngabe uyenza kube kubi okudingekayo. Ngokwemibiko, wake wenqaba indlela a Iklabhu yaseChina ehlobo kwe-2018 etshela I-BBC Scotland ukuthi "NgeChina, yimali enkulu, kepha ngithole injabulo lapha. "
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Kulesi sigaba sokubhalwa kwethu, sinikezela ngemininingwane eminingi ngamalungu omndeni kaBrendan Rodgers aqala kumama wakhe.
Mayelana noMama kaBrendan Rodgers: UChristiana wayenombono ohlukile wenkolo yobuKrestu kumyeni wakhe angazange awuvumele ube nomthelela omubi kuBrendan nakubafowabo. UChristina Rodgers wayengumbhikishi ozinikele waze washona ngo-2010, unyaka aba nesifo senhliziyo esibuhlungu ngawo.
Mayelana nobaba kaBrendan Rodgers: UMalachy Rodgers, ubaba kaBrendan Rodgers wayengumdwebi, ehlobisa futhi okubaluleke kakhulu, wayengumKatolika ozinikele. Waphila futhi wahlushwa yiCancer ngasekupheleni kwempilo yakhe. UMalachy wehluleka ukubekezelela ngemuva kokudlula emhlabeni kukankosikazi wakhe uChristiana ngonyaka ka-2010. Wafa ngenxa yesifo somdlavuza ngemuva nje kokuba umkakhe eshiye umhlaba.
UBrendan Rodgers Brothers: Emndenini kaBrendan Rodgers owenziwe ngabazakwabo besilisa futhi njengoba kushiwo phambilini, akuyena kuphela owomndeni wakhe onambithe impumelelo. UBrendan nomfowabo, uMalachy Rodgers Jnr baziwa njengoRodgers ophumelelayo. UMalachy Rodgers Jnr ofanekiselwe ngezansi uzenzele igama ngokuqhubeka nokwenza izifundo zomculo ku Nashville, Tennessee, Iziwe Ezihlangene.
Hlangana noMfoweth 'uBrendan Rodgers- uDeclan Rodgers.
Uthi bewazi?… UMalachy Rodgers Jnr waseNashville oteketiswa njengo 'Mal'udlale ohlelweni lwethalente lwe-BBC'Izwe Epholile'kwelakubo eNyakatho ye-Ireland ngaphambi kokuya e-US (Tennessee) lapho aba yiqhawe lenkolo. Ngakolunye uhlangothi lwempilo, omunye wabafowabo bakaBrendan Rodgers ogama lakhe linguDeclan Rodgers akazange akwenze ukuthi ucebe futhi uphumelele. U-Declan Rodgers ompofu oboniswe ngezansi, wake washaywa ngempama ngemuva kokujahwa ngenxa yezikweletu ezinkulu.
UBrendan Rodgers 'wephule umfowabo- uDeclan.
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
UBrendan Rodgers ungumphathi wezigidi eziningi owake wathola isinxephezelo esihle sama- £ 8million ngesikhathi exoshwa njengomphathi weLiverpool ngo-Okthoba 2015. Ukuqhubekela phambili kuCeltic, waphinde waba ngumphathi okhokhelwa kakhulu emlandweni weqembu, ehola nxazonke £ 45,000 ngesonto.
Naphezu kwazo zonke lezi zimali, uBrendan uphila impilo engaphakathi. Lokhu kusho ukuthi uRodger une isisekelo esiqinile sendlela angagcina ngayo imali yakhe isheke futhi ihlelekile. Akayena umuntu wezindaba zokuxhumana, akanama-akhawunti (ngaleso sikhathi sokubhala) futhi umane agxile emsebenzini wakhe.
Ukwazi uBrendan Rodgers Amaqiniso Wendlela Yokuphila.
Amaqiniso kaBrendan Rodgers Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ubunzima be-4 Iminyaka Yempilo Yakhe: Iminyaka eqala ku-2010- 2014 kwathiwa iyiminyaka ebanga usizi kakhulu Impilo yonke kaBrendan Rodgers. Leyo minyaka yagcwala izinkathazo zomndeni ezaqhathanisa ingcindezi evela empumelelweni yobungcweti (njengoba kubonakala ezinsukwini zakhe neLiverpool). Ukuqala, Ukudabuka kwenhliziyo komndeni kwaqala lapho eshonelwa ngumama, kwalandelwa ubaba wakhe ezinyangeni ezimbalwa kamuva. Ukulandelana kwenhlekelele kwaqhubeka ngenkathi uRodgers eshonelwa ngumkakhe (ngesehlukaniso), ilahlekelwe yimpahla yakhe (ukuhlukanisa) futhi ekugcineni, alahlekelwe umsebenzi wakhe ovelele weLiverpool.
Owayengumyeni kankosikazi wakhe wakamuva wazibulala: Unkosikazi omusha kaBrendan Rodgers uCharlotte Searle wayekade eshade noSteven Hind, umphathi wezentuthuko kwezamabhizinisi. Bobabili ababoniswe ngezansi babeshade izinyanga eziyi-17, babenendodakazi ndawonye ngaphambi kokugcina bahlukanise ku-2013.
Owayengumyeni kankosikazi kaBrendan Rodgers waqeda impilo yakhe ngemuva kokuthi unkosikazi wakhe emshiyile.
Uthi bewazi?… USteven Hind watholakala eshonile egumbini lakhe eLondon Bosco Hotel. Uzakwabo wabona ukuthi ushonile ngemuva kokwehluleka ukusebenzela u-Okthoba 2017. Owayengumyeni kankosikazi kaBrendan Rodgers wazibulala ngemuva kokubhala incwadi ethi 'akakwazanga ukuqhubeka'.
INdodana Yayo Yamangalelwa Ngokuhlukumezeka: Ngemuva nje kokuba uBrendan Rodgers esanda kwehlukana nonkosikazi wakhe, kwaqhubeka usizi lomndeni wakhe. Ngalesi sikhathi, indodana kaRodgers (u-Anton) nabanye abantu abathathu bangena enkingeni. Bazithwebula izithombe ngesikhathi behlasela abesifazane abasha, okuyisenzo esiholele ekuboshweni nasekushushisweni kwabo enkantolo.
UBrendan Rodgers Son wake waboshwa ngemuva kokuba ehlasele intokazi.
Leli cala kuthiwa lenziwa eJury's Inn Hotel eyayiseBrighton ngoJulayi 2011. Okubuhlungu ukuthi uBrendan Rodgers wabukela ukuqulwa kwecala lendodana yakhe enkundleni yezemidlalo yomphakathi. U-Anton wabuye watholwa engenacala ngemuva kokusolwa ngecala lokushaya ual, elalibizwa ngubaba wakhe 'Ihlazo'
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iBrendan Rodgers Childhood Indaba Yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabonakali kahle, sicela wabelane ngakho nathi ngokuphawula ngezansi. Siyohlala siyazisa futhi siyihlonipha imibono yakho.
Ama-Rhian Brewster Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Usuku olushintshiwe: Disemba 11, 2020
Usuku olushintshiwe: Okthoba 5, 2020
Usuku olushintshiwe: Disemba 27, 2020
Usuku olushintshiwe: Okthoba 17, 2020
Usuku olushintshiwe: Novemba 2, 2020
I-Emre Can Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts